विशेष जो Nesbø। म्याड्रिडमा ह्यारी होलको सिर्जनाकर्ताको साथ। प्रभाव | वर्तमान साहित्य
विशेष जो Nesbø। म्याड्रिडमा ह्यारी होलको सिर्जनाकर्ताको साथ। प्रभावहरू
मारियोला डियाज-क्यानो अरेवलो | | साक्षात्कार, लेखकहरू, घटनाक्रमहरू, किताबहरु, हाम्रो बारेमा, कालो उपन्यास
(C) मारियोला डेजा-क्यानो र (c) गेटाफ नेग्रोको फोटो
जो नेस्बे यी दिनहरु मा थियो गेटाफे कालो, आफ्नो मा XII संस्करण त्यो हिजो बन्द छ र त्यो एक अतिथि देश को रूप मा भएको छ नर्वे। को प्रतिष्ठित लेखक कालो उपन्यास, आयुक्तका बुबा ह्यारी प्वालमा धेरै कार्यहरु मा भाग लिए Days दिन प्रेस सम्मेलन सहित प्रस्तुत गर्न चाकू, उहाँको भर्खरको पुस्तक, र पाठकहरूसँगको केही भेट। यो विशेष वस्तु मेरो हो सामान्य कालक्रम कालक्रम अनि मेरो अधिक विशेष प्रभावहरू उसको बारेमा, कुनै श doubt्का बिना मेरो सबैभन्दा प्रतिष्ठित लेखकहरू। यो नछुटाउ।
1 १०/२/23/२०१ - - लोरेन्जो सिल्भा (जो Mutua Madrileuaa फाउंडेशन) संग जो Nesbø
1.1 त्रासदीहरू र जीतहरू, मार्क ट्वेन, दर्शन, मनोवैज्ञानिक र "हो, मैले लेख्नको लागि कहिले पनि केही चीजहरू लिएको छु।"
1.2 प्रश्न र उत्तरहरू
2 १०/२/24/२०१ - - प्रेस सम्मेलन र एस्पासियो मर्काडो (गेटाफे) मा कुरा
3 १०/२/25/२०१10 - पेद्रो सालिनास पुस्तकालयमा बैठक
3.1 हास्यास्पद पलहरू - ह्यारी होलको अनुहारहरू
3.2 अधिक नेस्बे पुस्तकहरूमा थप हस्ताक्षर र सम्पादकीय स्कूप
4 १०/२/25/२०१10 - पाठकहरूसँग बैठक र कासा डेल लिब्रोमा हस्ताक्षर गर्दै
5 जो Nesbø का मेरो प्रभाव - सरलताको करिश्मा
१०/२/23/२०१ - - लोरेन्जो सिल्भा (जो Mutua Madrileuaa फाउंडेशन) संग जो Nesbø
त्रासदीहरू र जीतहरू, मार्क ट्वेन, दर्शन, मनोवैज्ञानिक र "हो, मैले लेख्नको लागि कहिले पनि केही चीजहरू लिएको छु।"
भीडमा Mutua Madrileña फाउंडेशन को अडिटोरियम यो वार्तालाप नेस्बे र सिल्भाको बीचमा भयो अपराध उपन्यास मा मानव अवस्था। एक घण्टा र एक चौथाई जुन तपाईं हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ र जनताबाट आएका प्रश्नहरूका उत्तरहरू सामेल छन्। अवश्य पनि उनीहरूले उनीहरूको ह्यारी होल श्रृंखलाको नवीनतम किस्तको बारेमा कुराकानी गरे, चाकू, तर पनि बारेमा शास्त्रीय त्रासदी आधार त्यो सबै मा छ।
त्यो हुन सक्छ सब भन्दा सान्दर्भिक वा गम्भीर पल Nesbø बहस जसमा Lorenzo Silva जस्ता एक महान मोडरेटरको साथ सँगै आजको समाजमा धर्म र नैतिकताको प्रभावमा। र तिनीहरूले शक्ति मा जोड दिए नकारात्मक ऊर्जा र अनुभव (पराजित र नाटक) त्यो सँधै सकारात्मकहरूमाथि प्रबल हुन्छ (जीत र खुशी) किनकि त्यो धारणा पछिल्लो बारेमा-वा यो लाग्छ- छोटो.
त्यो उच्चारण त्यो हो जुन एक भन्दा बाहिर छ उसको चरित्रको सार र उनको काल्पनिक जीवन, जो पहिले नै छ अन्तको लागि ट्र्याकमा जसमा उसको पहिल्यै धेरै कुटपिट गरिएको प्रहरी बूढा हुने सम्भावना छैन (यस पछिल्लो किस्तमा ह्यारी होल पहिले नै of० लाई मन पराउँछन्)। Y कि सृष्टि को लागी यसको सिद्धान्तहरूमा पनि सत्य रहनुपर्दछ र वातानुकूलित महसुस गरिरहेको छैन द्वारा उनीहरू के सोच्छन् वा सोध्न सक्छन् तपाईंको पाठकहरू.
पर्याप्त मजाकको साथ एक टिप्पणी - नॉर्डिक, तर चुटकुले - सिल्वाको प्रश्नमा गयो स्कान्डिनेभियाई लेखकहरूसँग के हुन्छ सामान्यतया उनीहरूले प्राप्त गरेको सफलताको लागि। त्यहाँ नेस्बेले गम्भीर स्वर दिए र जवाफ दिए कि उनीहरू सबै एक बर्षमा एक पटक भेट्न संसारको विजय योजना.
थप प्रश्नहरू थिए तपाइँको पठन बारे, जुन सबै प्रकारका हुन्, तर अब अधिक ध्यान केन्द्रित गरियो दर्शन किनभने उनकी छोरीले उनी अध्ययन गर्दैछिन् (उनी उनीसँग म्याड्रिड आएकी थिइन् तर त्यहाँ थिइनन्)। वा व्यक्ति जुन उसलाई सबैभन्दा बढी असर गर्थे ऊ जवान छँदा, जुन ती हुन् मार्क ट्वेन-टम सॉयर र रोमाञ्चकारी हकलबेरी फिन-.
रमाईलो थियो यदि कहिल्यै केहि थियो लेख्नु। उसले हो भने, तथापि उसले के भनेन, यो उनले कसरी लेख्न सुरु गरे कि यो कस्तो छ, र भोलिपल्ट बिहान के बाहिर आयो भनेर एक थियो वास्तविक फोहर। अर्को राम्रो उनको थियो संकोचोला इशारा र संक्षिप्त "हो" को लागी यदि Harry लाई केहि राम्रो हुन्छ भने कहिलेकाँही र अर्को उनको बारेमा राय को बारेमा असफल संस्करण सिनेमाटोग्राफिक हिममानव.
कुरा अर्को हो को अन्तिम जवाफ संग समाप्त भयो एक मनोचिकित्सक केहि छ, त्यो पनि यो "हो" थियो यद्यपि यो योग्यता छ कि त्यहाँ अन्य पेशाहरु छन् मनोचिकित्सकहरु को धेरै अधिक प्रवण।
कार्य एक संग समाप्त भयो ठूलो जयकार र त्यहाँ एक थियो छोटो हस्ताक्षर केहि पाठकहरूसँग जससँग किताबहरू बोकेका थिए वा थिए। Y यदि तपाइँले राख्नु पर्ने हो तर त्यो क्षण त्यो नै थियो। हुनसक्छ सार्वजनिक वा गएको जस्तो देखिन्थ्यो लोरेन्जो सिल्भा द्वारा वा नेस्बेको बारेमा धेरै थाहा थिएन। र मानौं कि औसत उमेर र मेरो गहिरो आँखा यस शैली को एक पाठक को रूप मा र यस विशेष लेखक को अधिक जोडेन।
वा हुनसक्छ, कसरी हामीले त्यो हस्ताक्षरको आशा गरेनौं (जुन सिल्भाले घोषणा गर्‍यो र धेरै लामो नहोस् भनेर अनुरोध गर्‍यो, तर नेस्बेले टिप्पणी गरे कि उनको कुनै समस्या छैन र उनले फोटो पनि खिच्ने छन्), गठन भएको कतार यो उनको लागि खासै थिएन, तर होईन एक साथ अनुवाद को लागी हेडफोन फिर्ता। त्यसैले त्यहाँ थियो अनावश्यक क्षण, तर त्यो कि सबै भन्दा कट्टर प्रशंसकहरूले उनलाई बधाई दिन र उनी संग पोज गर्ने अवसर लिन सक्दछन्।
१०/२/24/२०१ - - प्रेस सम्मेलन र एस्पासियो मर्काडो (गेटाफे) मा कुरा
व्यक्तिगत रूपमा उपस्थित हुन नसक्नु लाजमर्दो कुरा हो, तर उसले मलाई भौतिक समय दिएन। भोलिपल्ट बिहान नेस्बेले पत्रकार सम्मेलन गरिरहेका थिए Iberostar De Las Letras होटलमिडियामा व्यापक रूपमा रिपोर्ट गरिएको। र दिउँसो उसले एमा भाग लियो गोलो टेबल नॉर्डिक समाचारको बारेमा पहिले नै गेटाफ मार्केट स्पेसमा, फेरि लोरेन्जो सिल्भा र उनका साथीहरूसँग रूथ Lillegraven (को लेखक गहिरो fjord मा) र आइसल्यान्डिक राग्नार जनेसन (डरको छाया).
१०/२/25/२०१10 - पेद्रो सालिनास पुस्तकालयमा बैठक
पहिले नै शुक्रवार बिहान जो Nesbø मा पाठकहरु संग एक बैठकमा उपस्थित थिए "पेड्रो सालिनास" केन्द्र सार्वजनिक पुस्तकालय लेखकले के प्रस्तुत गरे? अनामारिया ट्राइलो। त्यहाँ रिजर्भेयर पुस्तकका सम्पादक र रामडन हाउसको प्रेस र सञ्चार प्रमुख पनि थिए सांस्कृतिक समग्र दूतावासबाट न्युरेगा, जुन पनि छ को अनुवादक चाकू.
यो एक मा थियो वातावरण धेरै धेरै नजिकयद्यपि कम समयमा पनि। तर यो विशेष गरी राउन्डमा धेरै राम्रोसँग प्रयोग भएको थियो प्रश्न र लेखकलाई जवाफ, उहाँ फेरि उनको बारेमा थियो Harry Hole को भाग्य। यसको बारेमा पनि श्रृंखला को आफ्नो मनपर्ने शीर्षक, जो हो रोबिन, आफ्नो परिवारको व्यक्तिगत अनुभवहरु संलग्न गर्न को लागी, विशेष गरी उसको बुबा।
हास्यास्पद पलहरू - ह्यारी होलको अनुहारहरू
त्यहाँ थियो केहि, जस्तै जब उनी एक बक्सको साथ उठे चकलेटहरु कि उहाँ टेबल मा थियो र सबै संग साझा गर्न चाहानुहुन्छ। वा फिल्मको बारेमा फेरि प्रश्न र प्रतिक्रियाहरूको उत्तरहरू।
र यो यो हो कि एक सहायकले टिप्पणी गरे कि उनले केहि मन परेनन् या त अनुकूलन को कारण वा कारणले गर्दा शून्य शारीरिक समानता अभिनेता को माइकल Fassbenderaहैरी जुन तपाइँका सबै पाठकहरूलाई थाहा छ कि यसले उपाय गर्दछ १. 1,94,, उहाँ एउटा बाल्ड गोरा हुनुहुन्छ र यो प्रायः फिट हुन्छ कागजात। त्यसोभए - उसले ठट्टामा टिप्पणी गरे - कम्तिमा उनीहरूले सके ती बुट राखेका छन्. Nesbø हाँसे र, फेरि नॉर्डिक व्यंग्य संग, जवाफ दिए प्रश्न (राम्रोसँग बुझ्न बकवास) यो थिएन कि तिनीहरूले उहाँमा जुत्ता लगाए, यद्यपि उनले फसबेन्डर र सामान्यतया सबैको कामको प्रशंसा गरे।
यो त्यहाँ थियो जब म भित्र पसे, que मसँग छ धेरै समय सम्म मेरो आफ्नै उम्मेद्वार, अद्वितीय र ट्रान्सफर योग्य, त्यो हो, जस्तै प्रत्येक पाठकको लागि Harry को छवि। मेरो ती देशहरूबाट एक प्रसिद्ध अभिनेता को हो, ट्रन्ड एस्पेन Seim, मैले फेला पारेको डाटा मेजर वाइकि / / ए Anglo्ग्लो-स्याक्सन एक्सेंट कि श्री नेस्बे अन्तमा उजाड गर्न सक्षम थिए। "आह, हो, नर्वेलीयाली अभिनेता, हो, हो ..."। अचम्मको कुरा, विशेष गरी मेरो लागि, उहाँ गणना गर्दै हुनुहुन्थ्यो एक किस्सा त्यसले मलाई मेरो सबैभन्दा मनपर्ने वल्हल्लामा पुग्न मदत गर्यो:
"यदि सत्य हो भने, उसको नाम परिवर्तन गरिएको थियो, तर त्यो परियोजना भन्दा पहिले। ऊ अग्लो मान्छे हो (१.1,90 ० को आसपास र अब October 48 अक्टूबरमा बदलिएको छ) र, राम्रो, उहाँ पनि धेरै सुन्दर हुनुहुन्छ। थप मेरो नाम एक दिन किनभने हाम्रो साझा साथी छ। म केही सार्वजनिक ठाउँमा थिएँ, पृष्ठभूमिमा मैले सुनेको भन्दा एकदमै जीवन्त, र उसले मलाई भन्यो कि उसले मलाई पढ्छ र हैरी होल हुन चाहान्छ। मैले उसलाई ठीक भने, तर के यदि ऊ निश्चित थियो कि उसले पर्याप्त वा धेरै पिउन सक्छ Harry जस्तै। तब उनले मलाई जवाफ दिए: «ठिक छ, मलाई थाहा छैन, तर भगवानद्वारा म कोशिश गर्दैछु»»।
अधिक नेस्बे पुस्तकहरूमा थप हस्ताक्षर र सम्पादकीय स्कूप
कार्यक्रम बधाई र उपस्थितहरूलाई थप हस्ताक्षर संग समाप्त भयो। एकजनाले उसको १२ वटा पुस्तक ल्याएको थियो Nesbø धैर्यपूर्वक हस्ताक्षर गरीएको श्रृंखला को।
म कुरा गर्दै थिए जौमे बोनफिल, कसले मलाई जवाफ दियो? तिनीहरू कहिले प्रकाशित हुन्छन् हराइरहेको नेस्बे शीर्षक: हिउँमा रगत (हिउँमा रगत) र मध्यरातको सुर्य (मध्यरातको सुर्य), जुन अन्य भाषाहरूमा लामो समयदेखि आएको हो। मैले तिनीहरूलाई पहिल्यै पढिसकेको छु, ती छोटो छन् र हुन, स्वतन्त्र कथाहरूबाट होल श्रृंखलाहरूमा, तिनीहरू पनि छन् उत्कृष्ट, सधैं भित्र मेरो नम्र राय.
खैर, पहिलो को लागी योजना बनाईएको छ वसन्त २०१ 2020 र दोस्रो लागि त्यो वर्षको अन्त्य। त्यसैले जब हामी ह्यारीको अर्को किस्तको लागि पर्खिरहेका छौं, हामी केही राम्रो नेस्बे पढ्न जारी राख्नेछौं।
१०/२/25/२०१10 - पाठकहरूसँग बैठक र कासा डेल लिब्रोमा हस्ताक्षर गर्दै
थियो नजिकको कार्य पाँच विजेता संग, सम्पूर्ण स्पेन बाट आएका, पढाइको म्याराथनको एक हप्ता पहिले प्रकाशक द्वारा बोलाइयो। र संगै सदस्यहरूको एक जोडी जो Nesbø मा लगाइएको (म आफैले यसलाई सिर्जना गरेकोमा निश्चित छु) आमन्त्रित हुन धेरै भाग्यशाली।
बाहिरियो एक आराम बैठक र muy cómodo। टोनद्वारा, प्रश्न र टिप्पणीहरू, र विशेष गरी द्वारा बढी सीधा तरीका जसमा नेस्बेले सबै जवाफ दिए।
आफ्नो स्पष्टीकरण बाट किन केही पेट भित्र चाकू, हामी के टिप्पणी गर्छौं तिनीहरूलाई कुनै पनि कुरा प्रकट नगरी किनकि केहीले यो सिध्याइसकेका छैनन्। मा उनको दोहोर्याइएको ती विचारहरु, सुझावहरु वा तपाइँको पाठकहरु को घबराहट बाट बहन छैन यस चरित्र वा अन्य fates को अनुहार मा। र त्यो मा उनको जोड निर्माण प्रक्रियाको बिन्दु यसको मतलब तपाइँले यसमा लैजानुको मतलब के हो स्थिति que हुनसक्छ तपाईंले कल्पना गर्नुभएको छ वा छैन, तर सधैं तपाईं याद बिना। वा बरु, तपाईं चेतावनी छैन कि हेरफेर तर सधैं टाढा गए र झर्नुहोस् यसमा।
सबै केको लागि, जब ती गन्तव्यहरू पत्ता लगाउँदछन्, तिनीहरूले समान रूपमा तपाईं आश्चर्यचकित गर्नुहुन्छ तपाईंले तिनीहरूलाई बुझ्नुभयो र यसो भन्दै बेवास्ता नगर्नुहोस्, "ओह, पक्का, यो सत्य हो।" राजीनामा र स्वीकृति संग, तर भावना को साथ राम्रोको लागि वा नराम्रोको लागि रमाईलो गर्नुभयो.
हामी उहाँसँग कुराकानी गर्न सक्षम छौं, उनले हामीलाई सोधे कि हामी कहाँका थियौं र टिप्पणी गरे कि उनले कसरी सामान्यतया डाटा सम्झन्छ यसरी आफैंलाई मद्दत गर्दछ फुटबलकोउदाहरण को लागी आह, यो यस्तो साइटबाट हो, तपाईं यस्तो टोलीको अनुयायी हुन सक्नुहुन्छ ... याद गरौं कि यो थियो jugador पेशेवर मा उनको किशोरावस्था सम्म अस्थिबंधन 19 साल।
मेरा प्रश्नहरूको एक जोडी हो संगीत उसले सुन्छ वा मनपराउँछ (प्ले, कम्पोज र उसको ब्यान्ड मा गाउँछन् Derre भन्नुहोस्) यो पनि ह्यारीको हो। उनले जवाफ दिए si तिनीहरूले धेरै साझायद्यपि उनले पछुताए कि ह्यारीलाई आफ्नो ब्यान्ड मनपर्दैन। र गए हल्का कुरो एक संग "म तिमीलाई कहिले सुन्ने छैन" कहिले हामी तपाईंलाई हैरीको अर्को साथ जानको लागि आग्रह गर्दछौं किनभने त्यसले हामीलाई अन्त्य हुन सक्दैन चाकू.
यो सबै पछि समाप्त भयो हस्ताक्षर र फोटो हामी सबै जो त्यहाँ थियौं, भए पनि सानो सार्वजनिक, सत्य। ग्रान भिसामा कासा डेल लिब्रो म्याड्रिडमा प्रमुख स्टोर हो, तर नियत साइट यी कार्यहरु गर्न र सबै भन्दा माथि जब यो नेस्बेको क्यालिबेरका मानिसहरूसँग हुन्छ, यो सबै भन्दा राम्रो छैन। त्यो सानो सार्वजनिक बाहेक त्यहाँ थियो। न त त्यो समय सबैभन्दा उपयुक्त थियो, तर एजेन्डा श्री नेस्बेको थियो जटिल। त्यसो भए क्षतिपूर्ति त्यो निकट थियो लक्जरी उनीसँग।
जो Nesbø का मेरो प्रभाव - सरलताको करिश्मा
तिनीहरू भन्छन् कि छोटो दूरीमा तपाईं मान्छे राम्रो गर्न सक्नुहुन्छ जहाँ छ। र त्यो पनि तपाइँले उपस्थितिहरूमा विश्वास गर्नु हुँदैन। मूलतः यो छ। यस मामला मा, तथापि, कारकहरू र अधिक व्यक्तिगत। र विशेष गरी पहिले नै निर्दिष्ट गर्दै: मेरो.
तपाईं जो नेस्बे र उनका उपन्यासहरूमा आइपुग्नुहुन्न जब तपाईं २० बर्षको हुनुहुन्छ। न त 30० को साथ। म पहिले नै पूरा गर्दै थिए विभिन्न 40 जब मैले फेला पारे. तपाईंसँग पाठकको रूपमा पुनःसुरु हुनु पर्छ सामान्य रूपमा र विशेष गरी अपराध उपन्यास। किनभने तपाईसँग धेरै छ गस्केट, हिम्मत, इस्पात र महाकाव्य धीरजको तंत्रिका अगाडि उभिन, प्रतीकात्मक रूपमा, जस्तै एक साहित्यिक जनावरको ह्यारी प्वाल.
तर त्यो हो ह्यारी अवस्थित छ र पहिले नै हाम्रो साथी होहो, केहि सिफारिश गरिएको छैन। नेस्बेले पहिले नै धेरै पटक यसो भनेका छन्: "उनी ती सहकर्मीहरू मध्येका हुन् जससँग तपाई सप्ताहन्तको लागि जानुहुन्छ तर सोमबार तपाइँले फेरि तिनीहरूलाई कल गर्नुहुन्न।" र यसैले हामी महसुस गर्छौं कि हामी उसलाई माया गर्छौं, हामी समानुभूति राख्छौं र उहाँप्रति अधिक दु: खी महसुस गर्छौं।
धेरै चीजहरू पाइपलाइनमा छोडियो बताउन, सोध्नु भन्दा Nesbø। एउटा हो यदि तपाईंलाई त्यो थाहा छ, पढेर अहिल्यै होईन चाकू तर अब धेरै पहिले, उसको सृष्टिकर्ताले उहाँमाथि कृपा गर्नुभयो। किनभने यो छ। यसको आकर्षण, आकर्षण र लत को शक्ति को लागी। भावनात्मक ह्या hang्गओभरको कारण कि उहाँ हामीलाई छोड्नुहुन्छ हरेक पटक हामीले अर्को एपिसोड पढ्छौं जति डरलाग्दो तर वास्तविक जीवनमा पोख्त छ। Oयो कसरी हुन्छ? केहि केसहरूमा, किनभने त्यहाँ धेरै पाठकहरू que तिनीहरूले उहाँलाई चिन्न Harry जस्तै। र मैले बुझें। किन?
किनभने हेरीलाई उसको सिर्जनाकर्ताको सरलताको साथ प्रदान गर्न धेरै सजिलो छ। यो ठीक एक प्रदान गर्दछ कि प्रदान गर्दछ करिश्मा त्यो तिनीहरूसँग छ दुबै। र उहि समयमा, र त्यहाँ जादू छ, सेयर पनि एक समान विरोधाभास.
ह्यारी मानव अपूर्णताको एक उत्तम रचना हो, एक विशाल शारीरिक खामको साथ जे भए पनि यो कागज हो। र यो बाहिर जान्छ त्यो वास्तविक वास्तविक नेस्बेको बिल्कुल विपरीत हो: कमजोर र लगभग असहाय, मानौं कि यो कुनै पनि प्रयास वा अचानक आन्दोलनको साथ कुनै पनि क्षण मा तोड्न सक्छ। र यो पनि उनको साथ लजालु र मायालु देखिन्छतपाइँ के देखाउन चाहानुहुन्छ? चिसो तर के प्रसारण गर्दछ तातो जब तपाईंसँग यो छ केहि ईन्च। जस्तै यो गर्दछ कम र ढिलो टोन ती भागहरूको भाषाहरूमा आवाजको आवाज।
उसलाई सबै एक देखिन्छ ध्यान नदिई जानको लागि इरादा सेट। तर यसको विपरीत प्राप्त गर्नुहोस्: त्यो सरलताको लागि तपाइँलाई समात्नुहोस् यो रूपान्तरण गर्दछ अनुपम कला र शक्ति एक ब्रह्माण्ड, कथा र अद्वितीय चरित्र सिर्जना गरेको छ। ह्यारी होल जस्तो काल्पनिक कोही मात्र जो नेस्बे जस्तै दिमागबाट बाहिर आउन सक्षम छ। मेरो मतलब जो नेस्बे बाहेक अरु कसैले यो आविष्कार गर्न सकेन। तर न त पागल डाक्टर प्रोक्टर, न त बदला लिने उत्तराधिकारी सोनी लोफ्टस जस्तै र ओलाभ जस्ता बढी रोमान्टिक एन्टिहीरोहरू (हिउँमा रगत) वा जोन (मध्यरातको सुर्य)। न त होईन आफ्नै बनाउनुहोस् पौराणिक चरित्रहरू जस्तै Macbeth.
जादू र उपलब्धि यो गर्नु भएको छ, विशेष गरी त्यो विनाशकारी र कुटपिटको साथ, तर अझै पराजित भएको छैन, मादक पदार्थ धेरै पाठकहरू छक्क पार्नुहोस् सबै विश्व को। यदि तिनीहरू छन् विश्वव्यापी कथाहरू जुन हामी सबैले चिनेका र साझेदारी गर्दछौं, तर तपाईंले ती कसरी गणना गर्ने भनेर जान्नुपर्दछ। वा तपाईंले उनीहरूलाई उनले गर्नु भएको तरिका बताउनु पर्छ। त्यो शान्त रूपको साथ र त्यो भ्रामक नाजुकता शारीरिक।
किनभने ब्रह्माण्ड मा सबै चीज Nesb everything एक नम्र राम्रो काम देखि प्रभावित गर्न को लागी हो। निस्सन्देह, हेरौं कि उसले एक दिन ती दुई साथीहरूसँग काम गर्यो कि उसले भनेको छ कि ऊ आफैंसँग अझै हिक गर्न सक्षम भएको छैन।
चाहानुहुन्छ धन्यवाद दिनुहोस् गेटाफे कालो, तपाईको आयुक्त लोरेन्जो सिल्भा र RRSS को प्रबन्धकहरु लाई जलाशय पुस्तकहरू, यसको सम्पादक, Jaume Bonfill, र को टीम मार्केटिङ र को संचार अनियमित घर (ईवा कुएन्कालाई सधैं एक हजार धन्यवाद)। र पक्कै व्याख्या सेवा, साथ साथै स्टाफ पुस्तकको घर। उनको लागि ध्यान, दयालुता र उनीहरूले श्री नेस्बेलाई भेट्न कति सजिलो गरे.
लेखको पूर्ण मार्ग: वर्तमान साहित्य » साहित्य » लेखकहरू » विशेष जो Nesbø। म्याड्रिडमा ह्यारी होलको सिर्जनाकर्ताको साथ। प्रभावहरू
एक धेरै पूर्ण क्रानिकल कि सबै विशुद्ध संगठनात्मक पक्षहरूलाई जोड गर्दछ कि अधिक अन्तर्निहित हिस्सा जुन श्री नेस्बेले पछाडि छोडेका अनुभूति र भावनाहरू हुन्।
मैले "काल्पनिक नाजुकता" को वर्णनलाई प्रेम गरेको छु कि त्यो अक्षरको त्यो जनावरलाई बुझाउन जुन हाम्रो मूर्ति जो हो।
ह्यारी सिर्जना गर्ने क्षमता भएको (र विशेष गरी उहाँसँग यति धेरै वर्षसम्म बस्न) एक अलौकिक भित्री शक्ति हो, हो सर ...
धन्यबाद मारियोला, हामीलाई महान् शिक्षकको साथ गेटाफ नेग्रोमा प्रत्येक क्षणमा थोरै भाग लिनका लागि।
तपाईले भनेको जस्तो तपाई २०, वा 20० सम्म पुग्नुहुन्न तर जब तपाई त्यहाँ पुग्नुहुन्छ तपाईले कहिले पनि छोड्न सक्नुहुन्न।
मेरो लागि, हेरी होलको आत्माको साझेदारी गर्न र तपाईंसँग एक अविस्मरणीय अपराह्न आनन्दको लागि, मेरो आँखाको नजिकको अनुभवको लागि, यो सँधै मेरो जीवनको मुख्य आकर्षणहरू मध्ये एक हुनेछ।
Arantxa लाई जवाफ दिनुहोस्
उह, अरन्टक्सा, तपाईंको शब्दहरूका लागि मेरो भावनामा। यी दिनहरूको आत्माको साथ जुन म आफूलाई राम्ररी चिन्छु, म तपाईंलाई पनि भन्न सक्छु कि त्यहाँ यस्ता क्षणहरू छन् जुन यस जीवनलाई सार्थक बनाउँदछ, हामी सामान्य नभई कुतूहल भन्न सक्छौं। र विशेष रूपमा कुरूप वर्ष पछि म भित्र छु, यी भावनाहरू सुधार गर्न सबै भन्दा राम्रो हो। त्यसैले म धेरै खुसी छु कि यो विशेष क्षण हामीले समातेको र साझा गरेका छौं। आशा छ र त्यहाँ अझै छन्। धन्यवाद।
एक अत्यन्त पूर्ण क्रॉनिकल। तपाईलाई पढेर र भाग लिनको निम्ति यो निकै खुशीको कुरा हो, दूरबाट, यस अद्भुत बैठकमा। A एक अरब धन्यवाद। 😘
Ailin लाई जवाफ दिनुहोस्
विलियम शेक्सपियर खेल्छ
अल्फोसिना स्टोर्नी, अर्जेन्टिनी पोस्ट मॉडर्नवादको आइकन। Poems कविताहरू